“Marcelo waa Marcelo, mana u qalmin guuldarada naga soo gaartay kooxda Valencia” – Zidane – Gool FM
Halyeey Atletico Madrid ah oo sheegay in Barcelona ay ku qaldantay iibinta Luis Suarez
Arsenal oo kula dagaalameysa Liverpool saxiixa xiddig ka ciyaara horyaalka Bundesliga
Jürgen Klopp oo ka hadlay dhibaatada Liverpool kaddib guuldarradii ka soo gaartay Chelsea
Muxuu Tuchel ka yiri guushii ay kooxdiisa Chelsea kaga gaartay Liverpool horyaalka Premier League?
Chelsea oo saddexda dhibcood ka soo heshay Liverpool oo ay ku booqatay garoonka Anfield… +SAWIRRO
“Marcelo waa Marcelo, mana u qalmin guuldarada naga soo gaartay kooxda Valencia” – Zidane
Dajiye April 4, 2019
(La LIga) 04 Abriil 2019. Tababare Zinedine Zidane ayaa muujiyay sida uu kaga xunyahay guuldaradii xalay Real Madrid ka soo gaartay kooxda Valencia, kulan ka tirsanaa kulamada 30-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Real Madrid ayaa la kulantay guul daro xanuun badan, kadib markii ay qasaaro kala kulantay kooxda Velencia, natiijada ciyaartan ayaa ku ku soo idlaatay 2-1, oo loogu wood sheegtay wiilasha Zidane.
Macalina reer France ayaa ciyaarta kadib muujiyay in kooxdiisa Real Madrid aysan u qalmin inay la kulanto guuldaro kulankan, isagoo dhinaca kale si weyn u difaacay daafaca reer Brazil ee Marcelo.
“Waxaan ku soo galnay ciyaarta si fiican, laakiin waxaa naga dhashay gool, wax fursad ahna ma aanan helin qeybtii hore, ciyaartoyda waxay sameeyeen isku dayo, mana jirto waxaan ku eedeyn karo”.
“Waan guuldareysanay, waana inaan aqbalnaa midaas, isla markaana aan ka faa’iideysanaa oo aan sameynaa wax ka fiican kulanka soo aadan ee Sabtida”.
“Real Madrid si wacan ayay ku soo gashay ciyaartan, balse nasiib daro waxaan ku guuldareysanay inaan gool dhalino, waxaan si wacan u ciyaarnay kubadda, waxaan qabaa in natiijo ah barbaro ugu yaraan ay ahayd mid la aqbali karo”.
Intaas kadid tababare Zidane ayaa wuxuu istaagay in uu si weyn u difaaco xidga reer Brazil ee Marce, kadib markii uu la kulmay eedeymo kala duwan.
“Marcelo waa Marcelo, waan jeclahay sida uu u ciyaaro, waxaan u arkaa inuu si fiican u shaqeynayo, si wanaagsan ayuu tababarka u sameeyaa, waa xili ciyaareed dhamaanteen nagu adag, kaliya ma ahan Marcelo”.
HORDHACA: Kulanka adag ee kooxaha Dekedda Vs Muqdisho City Club
Tababare Sarri oo amaan ugu qubeeyay xidigaha Chelsea, kadib guushii ay ka gaareen Brighton